အင်ဂျင် (#3, ဒါမှမဟုတ် # 's3& 4) နဲ့ပြဿနာများ
မေးခွန်း အင်ဂျင် (#3, ဒါမှမဟုတ် # 's3& 4) နဲ့ပြဿနာများ
2 နှစ်ပေါင်း2months ago #851 by PAYSON
မင်္ဂလာပါကျနော်ဒီမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကတည်းကအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့။ ငါပြဿနာများ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်။ ရှေးဦးစွာငါကွန်ပျူတာများကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ ထို့နောက်အကြိုက်ဆုံးလေယာဉ်အချို့အနေနဲ့အားလုံးအဖြူရောင်အသားအရေနှင့်အတူဒေါင်းလုပ်နေကြသည်။ အဘယ်သူမျှမဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, အတွင်းပိုင်း (cockpit သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အဘယ်သူမျှမ} ။ ကိရိယာမပါဘဲပျံသန်းလို့မရပါ။ ဒုတိယအချက်မှာငါအလုပ်လုပ်ပေါင်းစုံ setup ကိုအတွက်အင်ဂျင်ရဖို့မထင်နိုင်။ ငါအပြစ်ကင်းစင်စွာမဆိုတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ် dual-အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုပါ, ဒါပေမယ့်တစ် 3rd သို့မဟုတ် 3rd ထည့်ထားနိုင်ပါတယ် နှင့် 4th, နှစ်ခုသာအလုပ်။ ငါတကယ် dehaveland Dash7ပျံသန်းရှိသောလက်ဝဲအင်ဂျင်တက်ပြေးလိုပဲ။ သူတို့ကပျင်းရိမှာ run ပေမယ့်အားလုံးပါပဲ။
2 နှစ်ပေါင်း2months ago #852 by Dariussssss
ကျနော်တို့အများကြီးပိုအင်ဖိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လေယာဉ်အရာ FSX ဗားရှင်းစသည်တို့ ... ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လေယာဉ်, ကလက်စွဲင်ရှိပါသလားသင်ကလိုက်နာရန်နှင့်ဒါ ... ဒါကကိုကူညီတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းင်ခဲ့ပါဘူး။
2 နှစ်ပေါင်း2months ago #855 by PAYSON
သငျသညျအကြှနျုပျ၏အစောပိုငျးကတုန့်ပြန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်းအဖြစ်ကြည့်ရှုသည်။ ငါစာအုပ်ကအားလုံးလုပ်ပေးနှင့် / သို့မဟုတ် "ကိုဖတ်-ငါ့ကိုရဲ့" ။ အဖြစ်ဝေးမဆိုအထူးသဖြင့်လေယာဉ်ပျံကဲ့သို့၎င်း, ငါကဆိုပါတယ်ထက်ပို2အင်ဂျင်နှင့်အတူမည်သည့်လေယာဉ်ပျံထင်ခဲ့တယ်။ ငါ X-56 လေယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေးအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာတလမ်းတည်းကို set up, ပြီးတော့အခြားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပြောင်းလဲမှုကိုရိုးရှင်းစွာအခြားသူများကိုတက်ရှိန်ကိုနေချိန်မှာပျင်းရိနေအားလုံးကိုလက်ဝဲအင်ဂျင်သို့မဟုတ်အားလုံးကိုညာဘက်အင်ဂျင် effects ။ ငါလို့လည်းသိကြပါတယ်ရေနွေးငွေ့ထုတ်ဝေသုံးပြီးတာပါ။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့်သင်တဦးတည်းပေါ်မှာငါ့ကိုကူညီခဲ့။ ကိုယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်ကပျောက်ကင်းအောင်ကုသကြပေမည်ထင်, ဒီအခြေအနေအပေါ်သင်၏အချိန်ကိုတက်ယူပြီးအဘို့တောင်းပန်။ သင့်ရဲ့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများရဲ့၌တူသောအဘယ်အရာကိုမျှဖြစ်စေ။
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #869 by PAYSON
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #870 by PAYSON
Whooooa !!! ငါ 1 thru အင်ဂျင်6သုံးပြီးများအတွက်ချိန်ညှိတင်ထားရန်မှန်ကန်သောလမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်။ အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် :-(
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #872 by Gh0stRider203
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #873 by PAYSON
ငါအများကြီးပိုအချက်အလက်လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ဘယ်လေယာဉ်အရာ FSX ဗားရှင်းစသည်တို့ ... ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လေယာဉ်ပျံကလက်စွဲင်ရှိပါသလားစသည်တို့ကို, သင်ကနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ဒါ ... ဒါက help.OS, လေယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းင်
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #874 by PAYSON
တကယ်တော့သမျှသောအချက်အလက်လိုအပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးက X-55 သို့မဟုတ်တစ်ဦးက X-56 Saitek အဆင့်မြင့်လေယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်ကန့်သတ် 1 &2အင်ဂျင်စွမ်းရည်ကြုံနေရနေကြသည်ကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်မရောဂါပျောက်ကင်းသည်ထင်သောအရာကိုတွေ့ပြီ။ ငါသည်ဤအစောပိုင်းက posted ကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအလုပ်လုပ်တယ်ငါ့ထံသို့သက်သေပြဖို့ဒီပြင်ဆင်ချက် 20 ကြိမ်ပြန်လုပ်တချို့အချိန်ကြာပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအပွင့်လင်း "setting များကို" ကို set up ရှိန်ကိုသွားပါ။ နောက်ကျော, ထိုအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ setting များကိုလုံးဝသွားပြီကြသောအခါ, ရှိသမျှ settings ကိုထွက်ကို ယူ. , အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုယ်တိုင်ကဘာမှမလုပ်အနေအထားမှာ (၎င်း၏မူရင်းအနေအထားအတွက်သော့ခတ် pin ကိုစွန့်ခွာရန်သေချာစေပါ) ပျင်းရိပြန်အပေါင်းတို့သည်လမ်းအကျယ်ဖွင့်လှစ်ဖို့အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုရွှေ့ ကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်ရန်, ထို့နောက်ပြန်ပျင်းရိခါတိုင်းလိုအဖြစ်အချိန်အဆညှိ, ဆက်တင်များထွက်ကိုပိတ်ပါ, သင်အကြိုက်ဆုံး4အင်ဂျင်ကိုလေယာဉ်ကိုသွားနှင့်သူကတစ်ဦးပါပေးပါ။ ဒါဟာငါ့အဘို့ပြုသကဲ့သို့က EZ အဖြစ်သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #875 by PAYSON
အိုးသြစတြေးလျ၏ကမ်းခြေထင်ရှားကျော်ကြားသောနဲ့ off ပျောက်ကွယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သင်္ဘောများတစ်ဦးသည်စစ်တိုက်အုပ်စုတစ်စု (YBBN) ရှိပါတယ်။